Niakatra ny hetra: nisondrotra 33% ny vidin-tsigara | NewsMada
Niakatra ny hetra: nisondrotra 33% ny vidin-tsigara
Ankoatra ny entana hafarana avy any ivelany, nisondrotra koa ny hetra alaina amin’ny sigara vokarina eto an-toerana. Miantraika any amin’ny vidim-piainana avokoa izany amin’izao fiandohan’ny taona izao na tsy niakatra aza ny vidin-tsolika, ny janoary teo.
Nisondrotra, nanomboka ny herinandro lasa teo, ny vidin-tsigara ho an’ny mpanjifa. Niakatra 25% ny vidin’ny sigara marika Good Look ka lasa 5 000 Ar (250 Ar ny singany) ny iray fonosana raha 4 000 Ar (200 Ar/singany) ny teo aloha. Nisondrotra 33% koa ny marika Melia mena ka lasa 4 000 Ar (200 Ar/singany) ny fonosana raha 3 000 Ar (150 Ar/singany) teo aloha. Antony, nasondrotry ny fanjakana ny haba manokana (droit d’accises) alaina amin’ny sigara sy ny paraky, araka ny voasoratra ao anatin’ny Tetibola 2019 ka nihatra nanomboka ny 1 janoary 2019 teo.
Araka ny efa notaterina teto, niakatra avokoa ny hetra amin’ny ankapobeny, indrindra ny entana hafarana avy any ivelany. Mitaraina mantsy ny indostria eto an-toerana fa potika ny fiharian’izy ireo satria mitobaka ny avy any ivelany sady amidy mora amin’ny mpanjifa. Manodidina ny 30% hatramin’ny 41% ny hetra nasondrotry ny fanjakana amin’ireo entana hafarana avy any ivelany, miampy ny vokatra avy amin’ny paraky, toy ny sigara, voalaza etsy ambony.
Singa iray mampidangana ny vidim-piainana koa ny fisondrotry ny vidin-tsolika satria efa manaraka ny vidiny eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Tsy nihetsika firy izany, tato anatin’ny volana vitsy, saingy mitaintaina hatrany ny mpanjifa eto an-toerana satria isam-bolana ny fiovaovany ampiharin’ny fanjakana amin’ny alalan’ny Ofisy malagasy misahana ny vokatra momba ny solika (OMH).
Raha aravona, nahatratra 7,1% ny fidangan’ny vidim-piainana, ny taona 2018, raha 8,3% ny taona 2017. Vinavinaina ho 6,8% izany amin’ity taona 2019 ity.